Dawladda Federaalka oo sheegtay inay awoodda Al-shabaab ku wiiqayso inta aan la gaarin bisha barakaysan ee Ramadaan. – Radio Daljir
Muqdisho, July, 30 – Abaanduulaha ciidanka dawlada federaalka Gen. C/Kariin Yuusuf Dhega-Badan oo waraysi gaar ah siiyay maanta Radio Daljir ayaa sheegay in dagaaladii sadexdii maalin ee laga soo gudbay ay ahayeen kuwo loogu tala galay intaan la gaarin bisha ramadaan in lagu wiiqo awooda kooxda Shabaab, islamrkana uu soo gaaray qasaaro xoogan rag fara badan oo dhaawac ahaan ay uga carareenna ay dawladdu geysay goobaha caafimaad halkaa oo lagu dabiibayo.
Gen. Dhaga.Badan ayaa waxaa kaloo uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee dawladda ay u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan goobo fara badan oo horay ay gacanta ugu hayeen kooxda Shabaab balse hada ciidanka dawlada ay jogaan ujeedkuna yahay sidii Muqdisho gabi ahaanba ay gacanta ugu dhigi lahayeen madaama sida uu hadalka u dhigay ay yaraatay awoodii Shabaab oo qilafaad dhexdooda iyo kala aragti duwanaan ay soo kala dhex gashay.
C/Kariin Yuusuf ayaa intaa ku daray in shacabka ay hada diyaar u yihiin garab siinta ciidamada dawlada taasna ay xaqiiq u tahay goobaha ay hada la wareegeen oo shacabku ay ciidanka la daba ordayaan biyaha iyo caanaha kuna faraxsan yihiin in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan.
Gen,C/Kariin ayaa sheegay in dhankooda uu soo gaaray qasaaro dhimasho ilaa 11 askari iyo dhaawaca 20 kale dhanka kalena waxaa uu sheegay in aanu la socon balse ay hayaan meydad fara badan oo ay ku dileen dagaalada ilaa maanta dhacaya kuwaa oo qaarkood uu sheegay in ay yihiin caruur yar yar oo la soo qaldan islamrkaana aan wali qaan gaarin.
Hadalka abaanduulaha ciidanka xooga dalka ayaa imanaya xili maalinkii sadexaad maanta uu Muqdisho ka socdo dagaal waaberigii hore ee saaka bilowday kasoo aan la ogeyn qasaaraha rayidka iyo dhinacyada dagaalamay soo kala gaaray inkastoo wararka haatan laga helayo Muqdisho ay sheegayaan in xogaa uu yara qaboobay dagaalka lakiin la filan karo mar walba iska hor imaad dhaca maadaama ay wali is horfadhiyaan labada dhinacba.
Max?ed Cabdi Xuseen ?Kuriya?